Halista De Bruyne, Hadii Uu Salaami Doono, Kulanka City & Hazard Oo Hal Arin Faray Xidigaha Chelsea %
Eden Hazard ayaa wuxuu sheegay in saaxibtinimada kala dhaxeysa Kevin De Bruyne, uu dhinac iska dhigi doono marka ay caawa fooda isku daraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League, ee dalka Ingiriiska.
Labadaan wiil, kuwaasoo uwada dashay Belgium-ka, ayaa waxay yihiin kuwa xiriir fiican uu kala dhaxeeyo, waxaana xusid mudan in De Bruyne, uu horey ugu soo dheelay naadiga kubada cagta Chelsea, ee uu caawa wajahayo.
Kooxda Pep Guardiola, ayaa waxay hadii ay caawa la talaabsadaan Chelsea, waxay noqon karaan kuwa loo doorto inay ku guuleystaan Premier League, maadaama kulamada harsan yihiin kuwa ay garaaci karto kooxaha u harsan.
“Wuxuu yahay ciyaaryahan cajiib ah, waana mid xariif ah marka uu garoonka jiro, wuxuuna kamid yahay kuwa aduunka ugu fiican marka uu garoonka ku jiro, maxaa yeelay wuxuu sameynayaa waxyaabo waali ah,” ayuu Hazard usheegay Sky Sport.
“Ka hor inta aan la baasan ciyaarta waxaan jeclaan lahaa inaan arko isaga, laakiin marka uu Garsoorka ka dhawaajiyo Seeriga waxaan isku deyayaa inuu saaxibkey yahay, ma ahan guud ahaan waa inta ay ciyaartu socoto.
“Marka ay soo dhamaato kulanka – guul, guul daro ama Barbaro – waan salaami doonaa, waxaana ku dhihi doonaa waxaa noo balan ah xulka qaranka iyo bisha Maarso,” ayuu hadalkisa ku daray weerar yahanka Chelsea.
Mar uu ka hadlayay sida ay ku badin karaan ayuu yiri: “Aniga ahaan, waxaan usheegi lahaa inay joojiyaan saaxiibadey [Sergio] Kun Aguero iyo De Bruyne, maaa yeelay waa kuwa dhaqdhaqaa badan, laakiin waa in kuwa la raacdaan.
Eden HazardEPLKevin De BruynePremier League
Maxaa Sababay Geeridii Lama Filaanka Ahay Ee Kabtanka Kooxda Fiorentina Ee Davide Astori?